के हो स्क्रब टाइफस ? स्क्रब टाइफसका कारण सङ्क्रमण बढ्दै – Latest News, Video, Entertainment,Health
September 22, 2019 September 22, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
काठमाडौं : तपाइ खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । कतै मुसाको टोकाइबाट अकालमा तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ ।
यसैगरी रगत परीक्षण, फोक्सोको परीक्षणबाट हुने गर्दछ । रोगको ‘एन्टिबडी’ पत्ता लगाउन एलाइजा टेस्ट र द्रुत परीक्षण गरिन्छ । महाशाखाले सबै जिल्लामा रोग पहिचान गर्न कीटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । NEPLTOP बाट
← ऋषि धमला र दयाहाङ राईबीच भयो यस्तो झगडा, प्रेम र रोमान्समा अर्को कीर्तिमान (भिडियो)
तरिका सिकन्नुहोस् : उसिनेको आलुको प्रयोगले अनुहारलाई चम्काउँने -Video →
‘बढी नफुर्कौं, अमेरिका र भारतसँग पनि मित्रता राख्नुपर्छ’
October 14, 2019 October 14, 2019 Info-Kantipur 0
बुद्ध एयरकाे नेपालगञ्ज जाने हवाइजाहाज – आपतकालीन अवतरण धनगढीमा ।
September 19, 2019 September 19, 2019 Info-Kantipur 0